Ahụmahụ Semalt banyere Online Frauds - Ihe & Olee
Ịba ụba nke aghụghọ aghụghọ na-arịwanye elu. Taa ka ị na-ekiri na nyochaa gịnaanị enweghị ike ịmara onye bụ onye dị adị ma onye bụ onye aghụghọ. Ha (ụmụ okorobịa ọjọọ) amụtala otú ha ga-esi gbanwee onwe ha ma jụ ọtụtụ puku mmadụudo nke uche site na ha antics.
Otú ọ dị, ịnwere ike ichebe onwe gị. Ọ dị mfe: ịmara nke ọmaonline frauds. Jason Adler, ọkachamara si Ọkachamara ,kwenyere na nke a ga-edebe ozi nzuzo gị, nkọwa ụlọ akụ, na ego n'enweghị nsogbu.
Na-echeta mgbe nile ka ị ghara izipu ego ma ọ bụ kọwaara onye ọ bụla ị maghị ma ọ bụ tụkwasị obi kaadị kọntaktị.
Naa ojoo ojoo
Mkparịta ụka ndị na-akpakọrịta nyerela ọtụtụ puku mmadụ aka ịhụ ịhụnanya. O di nwute, ihe ojoo ojootụfuola ntaneti ịntanetị n'ime ihe ngosi na-ezighị ezi. Kpachara anya. Mkparịta ụka scam egosiwo onwe ya na saịtị ndị dị na legit na ndị e kerendị na-enweghị atụ na-agba ọsọ. Nke a bụ ihe na-eme:
N'ebe nrụọrụ weebụ na-adịghị ọcha (nke na-agafe maka onye na-adịghị mma), ebubo ụgha ahụ na-ebo gị ebubomepee akaụntụ, ntanye na ikwukọrịta ndị nwere mmasị / onye mmekọ. Iji zere nke a, lelee nyochaa nke ịntanetị ka ị mara ihe bụọ dị mma na ihe na-adịghị.
N'ebe nrụọrụ weebụ ziri ezi, onye aghụghọ na-emepụta akaụntụ. Ha ga-eme ka hànwere mmasị n'ebe ị nọ, ma na ezi uche, ha na-abaghị uru. Ha ga-eme ka onye ikwu na-arịa ọrịa ma ọ bụ ihe mberede nke ha chọrọ ego:otu akụkụ nke ha ga - agwa gị ka ị banye na ya. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ha nwere ike iji onyinye nyere gị aka, ha rịọ maka nkọwa ụlọ akụ gị.na nkwa iji zitere gị ego.
Mkpesa, ịgba chaa chaa ma ọ bụ kpochapụ ọkụ
Nke a bụ ụdị ụdị ozi email kachasị adị na ntanetị weebụ. Ị ga-enweta email ma ọ bụozi na netwọk mgbasa ozi gị na-agwa gị na ị merie ihe nrite nke ị nwere ike ikwu ma ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ ma ọ bụ nye nkọwa kaadị akwụmụgwọ gị.Ha ga-agbalịsi ike ime ka ị kwenye na ọ bụ ọrụ ụtụ isi ma ọ bụ ihe dị otú ahụ..Ekwela ka a ghọgbuo gị. Ọ bụ ihe. Ọ bụ ojoro. Ọ bụrụ na ịha etinyeghị aka na ihe ọ bụla ịgba chaa chaa, ọhụụ ma ọ bụ ọrụ ebere ma kpachara anya.
Ndị a na-ebipụta igbe mbata gị. Na ojoro a, onye nwere ike ime ka ọ nwere mmasịngwaahịa / ọrụ gị, ma ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ nzukọ nwere mmasị ịmekọrịta gị. Ọ bụrụ na ha rịọ maka ego iji nyere ha aka ịhaziugwo na njedebe ha, mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịbanye maka ihe ijuanya. Mgbe ụfọdụ, ha na-arịọ maka nkọwa nkọwa gị n'agbanyeghị na nke a,ha ga-eme ka à ga-asị na ị bụ akụ gị ma ọ bụ nzukọ ọ bụla ị na-akpakọrịta. Ejila njikọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ị kpọrọ akụiji kwado otu ihe ahụ. Na mgbakwunye na nke a, ị nwere ike ịbịaru ojoro ọhụụ nke onye ahịa kwetara na ọ dị ụgwọ maka ọrụ.Ha na-arịọ maka nkwụghachi gị.
Ezi ihe nlereanya ga-abụ ihe atụ "ọrụ si n'ụlọ" nke kwere ọtụtụ puku mmadụdollar maka obere ọrụ. N'ọnọdụ ndị ọzọ, ọ bụ ezigbo ọrụ ka ị ga-akwụ ụgwọ. Enwere mpe azụ. Ị ga-akwụ ụgwọ makachebe ọrụ ahụ. Ekwela ka ego gị ghara ịcha n'iyi.
Ịzụta / ere ihe ojoro
Site na ndị mmadụ na-agbanye ahịa na ịzụ ahịa n'ịntanetị, e nweela ihe ojoro:ịzụta / ere nnukwo. Mgbe ị rịọrọ maka ngwaahịa ma ghara ịme mmeri ahụ ị na-aga ahịa gị. Mgbe ahụ, ị ​​ga-enweta oku site n'aka mmadụekwu na onye bidder mmeri na-akwado, ma ugbu a ị merie mmeri ahụ. Kedu ihe ha chọrọ? Ịzụ ahịa n'èzí ikpo okwu (weebụsaịtị). Emelaeme ihe a. Ị ga-agbagha ego gị, ị gaghị enweta ego (ihe ọbụla ị na-akpọ maka).
N'akwụkwọ a na-ahụ maka scammer, onye nkịta na-egosi ụmụ ya / ụmụ yaere. Ha na-eziga akwụkwọ ndebanye aha na ọtụtụ foto. Iji mezue nkwekọrịta a, a gwara gị ka ị kwụọ ụgwọ ụgwọ mbupu nke ga-emenweghachiri. N'ikpeazụ, ị ga-akwụ ego, ị gaghị enwe nwa nkita. Enweghị azịza ha Source .